Halal - xalaal - Wikipedia
Halal - xalaal
the 2016 film, eeg Halal (film).
Halal (/lɑːl/; ḥalāl), also spelled hallal or halaal,
waa shuruuc ay adeegsadaan dadka muslimiinta ah sidoo kale waxa quraanka lagu sheegay oo la barbar dhigay xaraan.
Xalal waa waxkasta oo uu ilahay baneeyay tusaale ahaan hilibka qaar waa xaraan qaarna waa xalal marka waxa loo adeegsadaa in lagu kala saaro in cuntadan xalal tahay iyo inkale
Cuntooyinka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Maqaal dhamaystiran: Islamic dietary laws
Calaamad xalaal ah oo Shiine ah (清真) makhaayad ku taal Taipei , Taiwan.
Bakhaar suuq xalaal ah oo loogu talagalay dukaamada ku yaal Woodbury, Minnesota ee Gobolada Isku Tegay ee Ameerika
Qoraal dhameystiran: Shuruucda cunnada ee Islaamka
Calaamad xalaal ah oo Shiine ah (清真) makhaayad ku taal Taipei, Taiwan.
Dhowr shirkadood oo cunto ah ayaa bixiya cuntada xalaasha lagu diyaariyo iyo waxyaabaha ay ka midka yihiin, oo ay ku jiraan xalaal xalaal ah, duubista guga, buulleyda digaaga, ravioli, lasagna, pizza, iyo cunnooyinka carruurta.  Cunnooyinka diyaarka ah ee xalaasha ah waa suuq macaamiil sii kordhaya oo loogu talagalay muslimiinta ku nool Ingiriiska iyo Mareykanka waxaana bixiya tiro badan oo ka mid ah tafaariiqda.  Cunnooyinka khudradda waa xalaal haddii aysan khamri ku jirin.
Tusaalooyinka ugu caansan ee xaaraanta (non-xalaal) cuntada waa hilibka doofaarka (hilibka doofaarka). In kasta oo hilibka doofaarku yahay hilibka kaliya ee muslimiintu cuni kari waayaan (Qur'aanku wuu reebay,  Suuradda 2: 173 iyo 16: 115  ) Cunnooyinka kale ee aan ku jirin xaalad daahirnimo ayaa sidoo kale loo arkaa inay xaaraan yihiin . Shuruudda alaabada hilibka doofaarka ah waxaa ka mid ah halka ay ka yimaadeen, waxa sababay geerida xayawaanka, iyo sida loo maareeyay.
Dukaan suuq iib ah oo xalaal lagu iibiyo oo ku yaal Woodbury, Minnesota ee Mareykanka.
Muslimiintu sidoo kale waa inay hubiyaan in dhammaan cunnooyinka (gaar ahaan cuntooyinka la warshadeeyay), iyo sidoo kale waxyaabaha aan cuntada ahayn sida is-qurxinta iyo dawooyinka, ay xalaal yihiin. Badanaa, alaabadaani waxay ka kooban yihiin badeecad xayawaan ama waxyaabo kale oo aan loo ogoleyn Muslimiinta inay cunaan ama ku isticmaalaan jirkooda. Cunnooyinka aan loo tixgelin inay xalaal u yihiin Muslimiinta inay cunaan waxaa ka mid ah dhiig  iyo aalkolo ay ka mid yihiin cabbitaanno aalkolo ah.  Qofka muslimka ah ee gaajoonaya inuu dhinto waxaa loo oggol yahay inuu cuno cunnada xalaalnimada ah haddii aysan jirin cunto xalaal ah oo jirta.   Inta lagu guda jiro duullimaadyada diyaaradaha muslimiintu waxay badanaaba dalban doonaan cunnooyin kosher ah (haddii cunnada xalaasha ah aan la heli karin) si loo hubiyo in saxanka ay doorteen aysan yeelan doonin wax walxaha doofaarka ah.
Noocyada asal ahaan la beddelay (GMO)
Shir ay ugu magacdaray "Agri-teknolojiyadda: U-hoggaansanaanta Shareecada" ayaa lagu qabtay Malaysia bishii Diseembar ee 2010 Xarunta Xarunta Macluumaadka Bayolojiyadda Malaysian (MABIC) iyo Xalaasha Caalamiga ah ee Xalaasha (IHIA), kaqeybgaleyaasha "waxay qaateen qaraar aqbalaya dalagyada GM iyo wax soo saarka sida xalaal yahay. Dhammaan waxyaabaha loo isticmaalo in lagu horumariyo waxay ka yimaadeen ilo xalaal ah .... Kiisaska Haramka ah ee la mamnuucay waxay ku kooban yihiin oo keliya waxsoosaarkii laga keenay Haram ee haysata astaamokoodii asalka ahaa ee aan si weyn loo beddelin. "
Maqaal ka soo baxay 2000 ayaa lagu sheegay: "Haddii badeecad la keeno suuq hiddaha oo ka timaadda il xaaraan ah sida (sida DNA doofaarka oo laga sameeyo alaabada soy]), maanta waxaa ugu yaraan loo tixgelin karaa Mashbooh - waa su'aal - haddii aan si buuxda loo xaaraan ahayn. Dhamaan cuntada ka soo baxda cilmiga bayoolaji ee maanta suuqa waxay ka yimaadeen ilo la ogolaaday. "
Caalamkoo dhan, shahaadooyinka cuntada xalaasha waxaa dhaleeceeyay kooxaha u ololeeya ka hortagga xalaasha iyo shakhsiyaadka adeegsanaya warbaahinta bulshada.  Dhaleeceeyayaasha ayaa ku dooday in dhaqanku uu keenayo kharashyo dheeri ah; Shuruud looga baahan yahay in si rasmi ah loogu caddeeyo cunnooyinka xalaasha ah ee xalaasha ah waxay keenaysaa macaamiisha inay kabto caqiido gaar ah oo xagga diinta ah.  Afayeenka Golaha Xiriirka Islaamka ee Australia Keysar Trad ayaa wariye u sheegay bishii Luulyo 2014 in tani ay ahayd isku day lagu doonayo in looga faa’iideysto dareenka ka soo horjeedka Muslimka. 
Rugta Ganacsiga ee Dubai waxay ku qiyaastay qiimaha warshadaha caalamiga ah ee macaamiisha cunnada xalaasha ah inay yihiin $ 1.1 tiriliyan sanadkii 2013, taasoo u dhiganta boqolkiiba 16.6 ee suuqyada cuntada iyo cabitaanka adduunka, oo leh koror sanadle ah 6.9 boqolkiiba.  Gobollada korriinka waxaa ka mid ah Indonesia ($ 197 milyan qiimaha suuqa ee 2012) iyo Turkey ($ 100 milyan).  Suuqa midowga yurub ee loogu talagalay cunnada xalaasha ayaa leh qiyaasta koritaanka sanadlaha ah ee ku dhawaad ​​15 boqolkiiba waxayna ku kacaysaa qiyaastii $ 30 billion.  Qiyaastii $ 8 bilyan oo ka mid ah waxaa laga helaa Faransiiska. 
Cuntada xalaasha ah iyo cabitaanka ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay suuqyada waaweyn iyo ganacsiga kale ee cuntada sida maqaayadaha. Suuqyada waaweyn ee Faransiisku waxay leeyihiin iibka cuntada xalaasha ah oo wadarta ah $ 210 milyan sanadkii 2011, kobaca 10.5% 5 sano kahor.  Gudaha Faransiiska, suuqa loogu talagalay cunnooyinka xalaasha ayaa xitaa ka weyn suuqa loogu talagalay noocyada kale ee cunnooyinka caadiga ah. Tusaale ahaan, sanadkii 2010, suuqyada loogu talagalay cuntooyinka xalaasha ah iyo cabbitaannada Faransiiska ayaa ku dhawaad ​​laba jeer ka ahaa cuntada dabiiciga ah.  Auchan, oo ah silsilad weyn oo dukaamada waaweyn ee Faransiiska ah, ayaa hadda iibisa 80 shey oo hilib xalaal ah oo la xaqiijiyay, oo ay weheliso 30 cunno oo xalaal ah oo horay loo kariyey iyo 40 xalaal ah oo xalaal ah. Makhaayadaha aan duuliyaha lahayn iyo adeegyada wax lagu cunteeyo ayaa iyaguna ku daray cuntadooda xalaal ah liiska. Intaa waxaa u dheer, shirkado badan oo cabitaan ah sida Evian ayaa qaaday dadaalkooda ah in ay ku daraan shaabad xalaal ah alaabada ay soo bandhigaan si ay u muujiyaan in biyahooda iyo cabbitaannada kale ay yihiin kuwo saafi ah oo aan xaaraan ahayn ama ka mamnuuc sharciga Islaamka. 
Quraanka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Erayada xalaal iyo xaaraam waa ereyada caadiga ah ee Qur'aanka loogu isticmaalo qeexitaanka qaybaha xalaal ah ama la oggol yahay iyo xaaraan ama mamnuuc.
Suuqa Xalaal ee magaalada Minneapolis, Minnesota.
Quraanka dhexdiisa, xididka h-l-l wuxuu ka tarjumayaa sharci ahaanta oo wuxuu sidoo kale tilmaami karaa ka bixitaanka xaaladdiisa xajka iyo soo galeynta dowlad xumo.  Labadaas dareenba, waxay leedahay macno ka soo horjeedda tan loo gudbiyay asalka h-r-m (haram iyo ihram).  Macno ahaan, xididka h-l-l waxa laga yaabaa inuu tilmaamo kala diris (tusaale ahaan, dhaarta oo la jebiyo) ama wax laga beddelo (tusaale, cadhada Ilaah).  Sharci ahaanta waxaa badanaa lagu muujiyaa Qur'aanka iyada oo loo adeegsado ficil ahalla (in la sharciyeeyo), iyadoo Ilaah lagu tilmaamayo mowduuca la sheegay ama la macneeyay.
Waxa qoray ; cabdirashiid maxamed cismaan
Suuqa xalal ee Minneapolis, Minnesota.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Halal_-_xalaal&oldid=197158"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 Nofeembar 2019, marka ee eheed 11:55.